Warra Oromoo waraanuuf gara wallaggaaf gujii ergaman……. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWarra Oromoo waraanuuf gara wallaggaaf gujii ergaman…….
OBN Onk13,2013 -Humni Addaa Raayyaa Ittisa biyyaa fi Poolisii Fedeeraalaa leenjii yeroo dheeraaf leenja’aa turan xumuruun tooftaalee waraanaa gara garaa leenjii kana iraatti baratan qabatamaan Magaalaa Hawaasaatti agarsiisaa oolaniiru.
Agarsiisa militarii guyyaa hardhaatiin gaara gubbaa haadaan bu’uun diina loohee seene irratti tarkaanfii fudhachuu ,galaanarratti paaraashuuttiin bu’uu, waraana firaa lola irratti dhahame tooftaa diina jalaa miliqsuufi ilaamaa rukutuun agarsiisawwan gurguddoo guyyaa haradha turan.
Agarsiisni kun guyyaa boruus haala walfakkaatuun akka itti fufuufi Itaamaajoor shuumii itti aanaa Raayyaa Ittisa Biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaa dabalatee, aanga’oonni Mootummaa olaanoon agarsiisa guyyaa boru irrattis ni argamu jedhameera.
Habiib Adamtu gabaase.
ኦነግን ለመዋጋት ወደ ወለጋ ጉጂ የሚላኩ የአብይ ወታደሮች በየ ቦታ እየረገፉ እየጠነቡ ነው፣ ድል ለሰፊው ኦሮም ህዝብ
Maastar Pilaanii 2ffaa Finfinnee irratti (Onk 23, 2020)
Risoortiin Soodaree kana dura haala nama gaddisiisuun cufamuunsaa ni yaadatama. Turtii ji’oota muraasaan booda guyyaa har’aa akka banamu murtaa’eera jedhame. Qulqulleessuunis har’uma jalqabamee jira. Yeroo gabaabaa gidduutti hojiisaa idilee eegala!
Sababii du’a Haacaaluu hundeessatiin Kanneen Godina arsii bahaa Aanaa Jajuu magaalaa bulbulaa irraa qabamanii mana hidhaa Aanichaatti hidhaman guyyaa kaleessaa mana hidhichaa keessaa baafamuun eessa akka geeffaman hanga ammaatti hin beekamu
Maaloo share godhaa iddoo isaan geeffaman maati fi firoottan akkasumas uummata oromoo bal’aa biraan gahaafii